Aqoonsiga Fursadda | Martech Zone
Tuesday, May 6, 2008 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Galabnimadii waxaan ku soo bandhigayay shirkad sharciyeedka gobolka ee Baraha Bulshada. Waxay ahayd wax aad u wanaagsan in la arko urur lahaa aragti saadaal si ay shaqaalaheeda ugu soo bandhigaan warbaahinta cusub. Adduunku xaqiiqdii wuu is beddelayaa laakiin wali waxaa jira erey khaldan oo jira oo sheegaya in baraha bulshada ay tahay 'waxa ay sameynayaan da' yarta walina aan si dhab ah loo qaadan.
Warshadaha Wargeysyada - Fursado La Seegay
Toban sano ka hor, waxaan la shaqeeyay wargeysyada waxaanan daawaday iyagoo aamusan oo daawanaya Arbacada ah iyo craigslist. Waxay u maleeyeen in loogu talagalay geeksyada iyo dhalinyarada sidoo kale… ilaa bilyanka doollar ee hoosta laga siidayo. Xaqiiqdii, dhab ahaan looma jeexin, si tartiib ah ayaa loo jiiday.
Wargeysyo badan ayaa qoray cabsi ay ka qabaan koritaanka teknoolojiyadaan, iyagoo aan ka walwal qabin inay ku sii fududaanayso warshadooda. Wargeysyo badan ayaa suulashooda ku lahaa Warshadaha Online-ka (InfiNet wuxuu ahaa mid ay shirkadeyda waalidkey la shaqeeyeen) laakiin waxay ku guuldareysteen inay jiidaan kicinta markii ay ku qasbanaadeen inay sameeyaan maalgashiga lagama maarmaanka ah when xitaa markay ogaadeen inay weli jirto waqti ay sidaa ku sameeyaan. Khadadka faa iidada shirkadaha ayaa la sameeyay, mana jiro maamule ka qaadaya 50% xadadka si uu u raaco adduunkan cusub.
Wargeysyadu waxay lahaayeen tabinta iyo ilaha lacagta si ay ula dagaallamaan khasaaraha. Xitaa waxay heleen faa iidada sumad goboleed lagu kalsoon yahay. Halkii ay la qabsan lahaayeen, in kastoo, waxay tilmaameen faro oo ay beddeleen hal maamule oo aan fahmin kan xiga ee aan fahmin.
Tobankii sano ee aan joogay joornaalka, weligay ma xasuusto kalfadhi uu qof soo galay oo uu kala hadlay teknoolojiyada cusub oo uu waydiiyay ama ka wada hadlay sida looga faa'iideysan karo si loo wanaajiyo waxtarka ama loo kordhiyo faa'iidada.
Waxay ahayd nasteexo maanta in la arko shirkad maxalli ah oo leh aragti ka duwan!
Burj Dubai - waa aasaas adag
Mid ka mid ah bogagga soo-bandhiggaygu waa sawir weyn oo ka mid ah Burj Dubai, dhisme dhismihiisu socdo Imaaraatka Carabta oo ka sara mari doona dhamaan dhismooyinka kale. Waxaa loo qorsheeyay in la dhameystiro dhamaadka sanadka soo socda waxaana hada lagu qiyaasaa inay leedahay 162 sheeko.
162 sheeko waa qiyaastii ugu dambeysay, in kastoo. Waxaa lagu xantaa in hadafku isbeddelay sannadihii la soo dhaafay, qayb ahaanna waxaa ugu wacan qiyaasaha injineernimada suurtagalka ah ee hoosta ka xariiqay xoogga aasaaska iyo dhererka dhismaha waayeen loo sara kiciyaa.
Hal fiiri dhismaha oo waxaad bilaabi kartaa inaad fahanto sababta. Aasaaska Burj Dubai gabi ahaanba waa mammoth, iyo cirifka ayaa kor u kacaya marka ay kor u socdaan.
Warbaahinta Bulshada - Aasaasida Ganacsiga
Baraha Bulshada waa shirkaddaada Fursad si loo bilaabo aasaaska aasaaska kobaca cajiibka ah tobanka sano ee soo socda. Aasaasida astaan ​​internet ah iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada iyo shabakadaha bulshada ayaa aasaas u ah isku xirnaanta la aasaasay.
Inta badan sida shabakadda, laga bilaabo maanta waxay ku siin doontaa shabag weyn si aad u qabato mug weyn oo ganacsi sanadaha soo socda. Dhulku wuu is beddelayaa. Mashiinnada raadinta - xitaa Google - ayaa waayi doona xoogaa ka qabashadooda sida aan ugu soconno webka micro shabakadaha sii wad inaad kacdo oo aad baraarto.
Mar alla markii ay shirkadaadu la qabsato teknoolojiyaddan, sida ugu fiican ee loo meeleeyaa waxay noqon doontaa marka noloshaadu ku tiirsan tahay. Shirkadda aan maanta la hadlay waxay leedahay fursado aan caadi ahayn. Waxay leeyihiin karti sameysay awood iyo natiijooyin kiisaska sii kordhaya sida qodobbada aan tartanka ku jirin iyo sharciga lahaanshaha.
Hadday shaqaalahoodu kula wadaagi lahaayeen khibradahaas khadka tooska ah maanta iyo aasaasid online maamulka, gaar ahaan juquraafi ahaan, waxay siin doontaa iyaga shabakadaha kor u qaada ganacsigooda berri. Waa xilli xiiso gaar ah u leh shirkaddan - waxay yihiin shirkad maskax furan, ballaadhan oo saamayn ku yeelan karta, laakiin yar oo ku habboon si ay u dhaqaaqaan ulana qabsadaan meeshan si dhakhso leh.
Waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideystaan ​​oo ay aqoonsadaan fursadda in yar oo iyaga ka mid ahi isla qolka ku dhex aqoonsadeen!
Tags: AnalyticsSuuq Goobid
Finalka Cisco I-Prize!
Guud ahaan, waan ku raacsanahay mabaadi'da aad sheegayso. Si kastaba ha noqotee, Warbaahinta Bulshada waa qayb ballaaran oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordheysa. Waxaad u maleyneysaa inaad tan ku dhex sameyso soo bandhigida, laakiin waxaa haboon in loo kala qaado warbaahinta bulshada qeybaha oo la muujiyo sida qeyb walba looga faa iideysan karo kartideeda shaqsiyeed.
Warbaahinta Bulshadu ugu horreyn waa hab lagu wadaago mugga. Sidaa darteed waxaad leedahay burburin cunsurrada aad jeceshahay inaad wadaagto iyo xitaa sida aad jeclaan lahayd inaad ula wadaagto. Fikradaha, ha ahaadaan kuwo xirfad ama shaqsiyadeed, waxaa lagu wadaagi karaa qaabab badan oo warbaahinta bulshada ah oo internetka ah. Fiidiyowgu sidoo kale wuxuu leeyahay xarumo u gaar ah. Tirada xarumahu waxay ku korayaan xawaare dhakhso leh. Si dhakhso leh xaqiiqda, in ay fududahay in lagu jahwareeriyo meesha laynka xariiqayo marka aad 'ku lug lahaato' Warbaahinta Bulshada.
Laakiin, waxa maskaxda lagu hayaa waa qodobka wacyigalinta ee sumaddaada, saldhiggaaga aqooneed ama sheygaaga ay heli doonaan markii waqti lagu qaato in yar oo qoto dheer lagu qoro Warbaahinta Bulshada. Maaddaama daraasadihii ugu dambeeyay ay muujinayaan in kasta oo kororka dadka isticmaala internetka, taraafikada goobaha ugu sarreysa laga bilaabo sanad ka hor aysan ku korin isla heerka oo xitaa ay hoos u dhacday mararka qaarkood. Tani waxay ugu wacan tahay dadka isticmaala Baraha Bulshada oo fiiriya tayada wanaagsan, waxyaabaha la isku daray.
Soo bandhigiddu waxay sii socotaa si loo kala saaro aaladaha iyo teknoolojiyadaha kala duwan ee laga faa'iideysto iyo sida looga faa'iideysto mid kasta - laga bilaabo isku xirka bulshada illaa baloog garaynta ilaa twitter, iwm. Waxaan sii wadaa inaan la hadlo qaar ka mid ah teknoolojiyadaha la cabbiri karo (iyo kuwa aan la qiyaasi karin).
Aad u badan in lagu dhejiyo hal qoraal, hubaal! Tani waxay ahayd ku dhowaad hal saac wadahadal. 🙂
Waxa aan rabo inaan ku xoojiyo akhristayaasheyda waa inay tahay inay maanta bilaabaan… inaysan lahayn 'sug oo arag' aragtida. Haddii aadan sameyn, waxaad si aad u fiican u gelin kartaa mustaqbalka ururkaaga qatar.
Mahadsanid Michael! Waxaad had iyo jeer bixisaa faallooyin xeel dheer oo midab ku daraya mawduuca. Runtii waan kugu riyaaqay waxaanan ku dhiiri gelinayaa qof walba inuu booqdo balooggaaga!
Waxaan ka shaqeeyay Boston Globe intii lagu jiray bartamihii 90-meeyadii. Iyagu waxay ahaayeen kuwa ugu horreeya ee aan aqoonsan oo keliya saameynta webka, laakiin ka faa'iideysanaya. http://www.boston.com
Haye Jayce! Haa, Boston Globe dhab ahaantii, wuxuu ka mid ahaa macaamiishayda dhammaadkii 90-maadkii oo shaqo fiican ayuu ka qabtay hirgelinta farsamooyinka suuq-geynta xogta. Xitaa waxay isticmaaleen qaar ka mid ah aaladaha falanqaynta haynta ee aniga (iyo kuwa kaleba) aan soo saaray.
Wargeysyada kale, sida Toronto Globe and Mail, Houston Chronicle, San Francisco Chronicle, Chicago Suburban Newspapers, iyo Detroit Press waxay xoogaa maalgashi ku sameeyeen teknoolojiyad cusub. Waan ku riyaaqay inaan mid kasta oo iyaga ka mid ah si aad ah ula shaqeeyo!
Maxay ganacsatadan jira u beddeli la’yihiin? Sababtoo ah waxaa jira waxyeello weyn oo ku sii socota isla wadadaas. Christensen ayaa sifiican ugu faahfaahinaya Dilka Dilida Innovator.
Tusaale fiican. Mararka qaarkood dadka waaweyni waxay i weydiiyaan 'goormaan qabaneynaa' wax soo saarkeena. Waxaan u sheegayaa maahan inta aan ganacsiga ku jirno! Hal-abuurnimadu waxay u baahan tahay hoggaamin aqoonsan in shirkadaha ay tahay inay sii wadaan maalgashiga hal-abuurnimada, haddii kale way halligmi doonaan. Waxay qaadan kartaa 100 sano ama ka badan… laakiin weli way halligmi doonaan.
Haddii aad rabto warqad cad oo aad u weyn oo ku saabsan warbaahinta bulshada si aad ugu gudbiso macaamiishaada, ka eeg tan smashLAB Vancouver: